ZOARA FANANTENANA – Non classé
Fotoam-piderana lehibe no hatao ny Asabotsy 03 Aogositra tontolo andro miaraka amin’ny Tarika Rija Rasolondraibe eny amin’ny Coliseum Antsonjombe.
Araka ny lohateny nomena ity fotoana manokana ity hoe « Rodorodom-piderana-Rodorodom-pitoriana-Vavaka hoan’ny tanindrazana », dia hisy fandaharam-potoana samihafa ao anatin’izany :
Hisy ny vavaka ho an’ireo faritra rehetra manerana ny Nosy
Hisy Tsiahy famintinana ireo Rodorodom-pitoriana natao tany amin’ny faritany sy fitondrana am-bavaka ny vokatry ny asa
Hisy ihany koa ny toriteny
Ny fiderana sy fitoriana moa dia hameno ny fotoana rehetra.
Koa samia ary mivonona sy mitaona ny hafa mba hiditra ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra.
Tsy misy ny vidim-pidirana fa hisy ihany kosa ny fizarana tapakila izay raisina eny an-toerana mialohan’ny hidirana ao anatin’ny Coliseum.
Raha fintinina fohy mantsy ny asan’ny sampana Dorkasy, indrindra ny eto amin’ny FJKM Ambohipo, araka ny nampahafantarin’ny filohany, R/toa Rasoarimalala Emilienne na i Mme Kiki, dia miainga amin’ny teny fanevany ao @ Asa:9/36: « ….ary be ny asa soa sy fihantrana izay nataon’izany vehivavy (Dorkasy) izany ». Ankoatry ny asa fitoriana amin’ny maha-sampana azy eo anivon’ny fiangonana izany, dia mifantoka betsaka amin’ny asa sosialy ny sampana Dorkasy FJKM Ambohipo. Miara-miasa @ sampana rehetra eo anivon’ny fiangonana anefa ny sampana Dorkasy @ fanatanterahany izany. Misy ny fanadihadiana ara-tsosialy atao, ka miainga @ ireny no ahafantarana ny olona mila fanampiana, sy ny zavatra tena tadiavin’ny olona. Misy ny fanampiana ho an’ny mahantra eo anivon’ny fiangonana, izany hoe ho an’ny mpino manana karatra; misy ihany koa anefa ny ho an’ny tsy mpiangona ao, toy ireo fanampiana omena @ tranga na loza tampoka, na vonjy aina maika. Santionany @ izany ohatra ny fanadihadiana ara-tsosialy ataon’ny Dorkasy, ka ny biraom-piangonana sy ny pasitera no manapaka ny fanampiana tokony atao @ izany, toy ny vonjy voina, ny marary, na ny olona mila fandidiana maika ihany koa. Misy ihany koa ny fanadihadiana manokana rehefa alohan’ny noely ahafantarana ny filàn’ireo olona sahirana, ka manao rakitra zavatra ny mpino eto @ FJKM Ambohipo rehefa alahady mialoha ny krismasy. Ary dia zarain’ireo tsara sitrapo izany ny alatsinainy ampitson’iny. Ny FJKM Ambohipo moa ankehitrny efa miditra @ AGR (Activité Génératrice de Revenu) ihany koa. Hetsika natao ho fanampiana sy ho fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toe-karena. Izany hoe karazana fampindramam-bola tsy misy tambiny na zanany, miainga @ fanadihadiana ataon’ny sampana Dorkasy ihany koa. Misy ihany koa ny Varin’i Jesoa, vary angonina @ mpino isaky ny alahady omena ny mahantra, na ireo tratry ny voina tampoka, ireny rehetra ireny dia mainga avy @ fanadihadiana ataon’ny sampana Dorkasy avokoa.
Akon’ny fankalazana faha 150 taona
Tokony ho tamin’ny 5 ora hariva mahery no nandefasana ny sarimihetsika Magdalena teto amin’ny fiangonana ho tohin’ny fankalazana ny faha 150 taona. Tsy omby ny fiangonana raha jerena ny sary eto ambany.
Kitra an’olona 7
Ekipa 6 avy amin’ireo faritra 7 no nifaninana
Ekipa 6 avy amin’ireo faritra 7 ao amin’ny FJKM Zoara Fanantenana Ambohipo no miatrika ilay fifaninanana baolina kitra lalaovin’olona 7 karakarain’ny sokajy Fanatanjahantena ary nampitondraina ny lohevitra hoe “Mizara Fitiavana” ny 13 sy 14 aprily eny amin’ny kianjan’Ankatso. Ireto avy ireo faritra fito ireo: Cite Ambohipo, Ambohipo Tanana, Ambohibato-CUR Ambohipo, Ampahateza-Andohaniato, Andohan’Imandroseza-Ambatoroka-Tsihadana, Ambolonkandrina-Antsahamamy, Ankatso1 ary ireo mpivavaka ivelan’ireo. Ny faritra fararoa irery no tsy nahafeno ekipa ary notsinjaraina tamin’ireo faritra hafa. Ny alakamisy 11 aprily teo ny fivoriana arateknika. Nosokafana tamin’ny filaharanan’ireo ekipa mpandray anjara ny fotoana ny sabotsy maraina. Nisy koa ny fifaninanana ho an’ny sokajy vehivavy nialoha ny famaranana ny alahady 14 aprily tolakandro nihaonan’ny ekipan’ny Dorkasy sy ny Antoko mpihira vehivavy. Marihina fa efa nisy ny fifaninanana hafa natao tamina taranja hafa toy ny tsipy kanetibe isaky ny volana aprily ary ny baskety kosa tamin’ny taondasa. Ny baolina kitra indray amin’ity taona ity izay tafiditra indrindra koa amin’ny fanombohana ny fankalazana ny faha-20 taonan’ny sokajy fanatanjahantena. Mbola hitohy ny fankalazana ka amin’ny volana novambra ny rodorodom-panantanjahantena.
Sokajy Fanatanjahantena:20 taona
Mankalaza ny faha-20 taonany amin’ny hetsika samihafa
Isan’ireo sokajy folo misy ao amin’ny FJKM “Zoara Fanantenana” Ambohipo ny rantsana fanatanjahantena izay manana ny teny filamatra manao hoe “ANDRIAMANITRA no aro sy hery ho antsika” Salamo 46:1A.
Taranja efatra hatramin’izao no efa iangaliana ao dia ny volley, baskety, baolina kitra ary ny tsipy kanetibe. Isan-taona dia misy taranja iray amin’ireo voatanisa etsy ambony ireo mikarakara hetsika. Tsy hoela dia hisy fifaninanana baolina kitra lalaovin’olona fito hotanterahina ny 13 hatramin’ny 14 aprily izay hatao eny amin’ny kianjan’Ankatso, fifaninanana izay misokatra ho an’ny fiangonana hafa ihany koa.
Marihina fa mankalaza ny faha-20 taonany izao ity sokajy iray ity izay niorina tamin’ny taona 1993. Mahatratra 146 izao ireo mpikambana ahitana sokajin-taona maro, 15 hatramin’ny 60 taona ary manana mpanazatra isan-taranja. Ankoatra an’io dia hisy koa ny rodorodo ara-panatanjahantena hatao amin’ny tapaky ny volana novambra, ahitana kosa indray ireo fifaninanana amin’ireo taranja efatra voalaza etsy ambony. Ity farany kosa dia fifaninanana anatiny ho an’ireo vakim-paritra fito ety amin’ny manodidina. Isan’ny fandaharam-potoana hivoaka ny renivohitra kosa ny fitoriana amin’ny volana jona hatao any Ambanja, faritra avaratry ny nosy iny.
Hetsika fanaon’ity sokajy ity koa ny fitoriana isaky alahady tolakandro izay miompana amin’ny fampianarana ara-panahy ary mikendry ny famolavolana ny kristianina ho mpanao fanatanjahantena. Mikasika ny fandaharam-potoanan’ny fanazarantena dia isaky ny asabotsy (6:00 hatramin’ny 8:30) eny Ankatso.
Filoha: Rakotoniaina Vonifanja
Filoha lefitra: Rakotobe Lovasoa Faneva
Mpitahiry vola: Andriamanjatoarivo Voahirana
Mpitahiry vola mpanampy: Ramaroson Heritiana
Mpitantsoratra: Rasolofoariniony Tolojanahary
Toby Betela Ahitantsoa
Ny 3 aprily 2003 no notokanan’ny Synodamparitany Antananarivo Atsinanana ny Toby Betela Ahitantsoa ao Ambohibao Ziona. Tokony ho 40km avy eto Antananarivo, eo anelanelan’i Talata Volonondry sy Anjozorobe.
Anisan’ny Toby FJKM natao ho fitaizana sy fitsaboana ny marary, famoahana demonia, fiaraha-mivavaka, fampianarana sy fampiofanana ary koa fanokanana ireo mpianatra mivoaka amin’ny SEFALA (Sekoly Fanomanana Laika) ity Toby ity.
Maro tokoa ny asa sahanin’ny tompon’andraikitra rehetra ao anatin’ny Toby raha araka ireo voatanisa ireo. Ny Mpitandrina RAKOTOARIVAO Liliane no mitarika amin’ny fitantanana ireo asa rehetra atao ao, sady Mpitandrina ny fiangonana FJKM Ambohibao Ziona.
Amin’izao fotoana izao dia mankalaza ny faha 10 taona ny Toby ka manao fanorenana ny trano fiaraha-mivavaka izay iarahan’ny fitandremana rehetra ato anatin’ny synodamparitany mientana mba ho tsangam-bato.
Mandroso ny ezaka fanorenana ary hita fa tena mila ny fanohanana am-bavaka avy amintsika kristiana. Misy ihany koa ny ezaka sy ny fanoloran-tena ataon’ny Sampana Fifohazana isa-pitandremana, na ara-bola izany na ara-pitaovana.
Fanahin’olona maro tokoa no vonjena ao anatin’izao asa izao ka hanaovan’ny fiangonana ho vain-dohan-draharaha ny fanorenana rehetra tokony hatao.
Toliara : FJKM AMBOROGONY
Ny Pasitera ANDRIANILANONA Rija
Mpitandrina ny FJKM Amborogony Fitiavana
Anisan’ny miatrika ny fanarenana ihany koa ny Fiangonana FJKM Amborogony Fitiavana taorian’ny rivodoza teo.
Ny tafotrano lasan’ny rivotra no isan’ny fahavoazana nahazo ny fiangonana araka ny tatitra azo avy amin’ny Mpitandrina. Isan’ny faritra tondraky ny rano ihany koa moa ny fokontany Amborogony, isaorana an’Andriamanitra lehibe anefa fa dia tsy niakatra avo loatra ny rano ary efa maina amin’izao fotoana izao. Tsy dia nisy entana simba ny tao anatin’ny fiangonana noho izany.
Marihina fa ity fiangonana ity dia anisan’ny niara-niasa tamin’ny FJKM Zoara Fanantenana Ambohipo tamin’ny rodorodom-pitoriana 2012 teto Toliara. Araka ny tatitra avy amin’ny Mpitandrina dia nitombo marobe tokoa ireo kristiana tonga mamonjy ny fotoam-pivavahana sy manao ny asa fanompoana ao anatin’ny Sampana taorian’ny fandalovan’ny mpitory nanao ny rodorodom-pitoriana.
Toy izao ny sarin’ny fiangonana ankehitriny :